प्रतिघण्टा ६७२ किलोमिटर कुद्ने बाइकको मूल्य ५६ करोड ! – Khabar Silo
प्रतिघण्टा ६७२ किलोमिटर कुद्ने बाइकको मूल्य ५६ करोड !
काठमाडौं– विश्वमै सवैभन्दा तीव्र गतिमा दूरी पार गर्ने सवारी साधनमा हवाइजहाज पर्छ, यसमा कसैको दुईमत छैन ।
रेल तथा ठूला इन्जिन भएका कारहरु पनि तीव्र गतिमा कुद्छन् । तर एउटा यस्तो बाइक निर्माण गरिएको छ । जसको टप स्पीड सुनेर विश्वास गर्न नै मुस्किल लाग्न सक्छ ।
विश्वकै सवैभन्दा तीव्र गतिमा कुद्ने बाइकले प्रतिघण्टा ६७२ किलोमिटर दूरी पार गर्छ । डज टोमाहक विश्वको सबैभन्दा पावरफुल सुपरबाइकमा नाम लेखाउन सफल बाइक हो । यो सुपर बाइकको टप स्पीड ६७२ किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ ।
यो सुपरबाइक हालै नन स्ट्रीट लिगल कन्सेप्टको रुपमा तयार पारिएको थियो । यसको मूल्य नेपाली रुपैयाँमा हिसाव गर्दा झण्डै ५६ करोड पर्न आउँछ । डज टोमाहक सुपरबाइक सन २००३ मा नर्थ अमेरिकाको इन्टरनेशनल अटो शोमा प्रदर्शन गरिएको थियो । यसको डिजाइन र स्पीड देखेर बाइक प्रेमीहरु आकर्षित भएका थिए ।
विश्वमा डज टोमाहक सुपरबाइक ९ जना व्यक्तिले मात्र किनेको बताइन्छ । डज टोमाहक सुपरबाइकले ६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको स्पीड मात्र १।५ सेकेन्डमा तय गर्नसक्छ ।
यसमा ८।३ लिटर भी–१० एसआरटी भाइपर इन्जिन जडान गरिएको छ । यो सुपरबाइकको इन्जिनले अधिकतम ५०० एचपीको पावर जेनेरेट गर्न सक्छ । यसमा २ वटा अगाडि र २ वटा पछाडि गरी ४ वटा टायरको प्रयोग गरिएको छ ।
आज कतिमा कारोबार हुँदैछ सुनचाँदी?
काठमाडौंः बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ ।बुधबार ७० हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको सुन आज पनि प्रतितोला त्यही मूल्यमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज पनि तेजावी सुन प्रतितोला ७० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । बुधबार पनि तेजावी सुनको मूल्य त्यति नै रहेको थियो […]
यति धेरै पुग्यो सुनको मूल्य तोलाको कति हेर्नुहोस् आजको बजार भाउ
Posted on July 8, 2020 Author khabar silo
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार तोलामा ९० हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य बुधबार बढेर ९१ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । यस्तै तेजावी सुन तोलामा ९१ हजार ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।यसैगरी चाँदीको मूल्य तोलामा ९५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको […]
आज पनि बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
Posted on August 18, 2021 Author khabar silo
काठमाडौँ । साताको चौथो दिन अर्थात बुधबार (आज) पनि नेपाली बजारमा सुनको भाउ बढेको छ। सोमबार प्रतितोला ४ सय रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ आज भने प्रतितोला २ सय रुपैयाँले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार, आज छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। छापावाल सुन हिजो प्रतितोला ९१ […]
बुवाको निधन भएको केहि महिनापछि अजय देवगनले खोले अचम्मको रहस्य, उनका शुभचिन्तक चकित !
चर्चित निर्देशक रेमो डिसुजाविरुद्ध गैर जमानती वारेण्ट जारी